Mety hisy hanontany tena… raha Highbridge dia fiaraha-monina orinasan-tserasera, maninona no faly ianao fa tsy misy mpamaky mandoa vola amin'ny fifampidinihana amin'ny media sosialy? Eny… holazaiko… tsy mila izany ianao. Ny consultants amin'ny media sosialy dia ampolony am-polony ary ny fahaiza-manaony dia toa olona afaka mamaky fehezanteny miampy 140 miaraka amin'ny tenifototra sy marika @.
21 Septambra 2011 à 2:21
Salama Doug, tonga eto aho nanaraka rohy avy amin'ny lahatsoratr'i Jay. Ny zavatra voalohany tsikaritro dia ny manome anao rohy manankarena amin'ny teny fanalahidy mahitsy izy ary ny rohy mifanandrify aminao dia ny lahatsorany miaraka amin'ny frame manodidina azy.
Ny zavatra faharoa tsikaritro dia tsy misy na iray aza amin'ireo safidy ao amin'ny fitsapan-kevitra izay tena paikady. Hetsika sy tetika ary andiana hetsika izy ireo. Ny fampiasana fitaovana media sosialy maimaim-poana dia tsy paikady. Fomba fanatanterahana paikady izany.
Toy izany koa, ny fandoavana mpanolo-tsaina media sosialy dia tsy paikady. Mandoa mpanolo-tsaina media sosialy ianao hanampy anao hamolavola, hametraka ary hanitsy paikady.
Ny zavatra farany tsikaritro dia hitanao fa raha tsy manana mari-pamantarana izay mamerina amin'ny tanjona stratejika ianao, dia mbola n00b ianao, ary mila ny fitarihana manam-pahaizana avy amin'ny mpanolo-tsaina momba ny varotra amin'ny Internet. Props amin'ny filazana izany.
21 Septambra 2011 à 2:35
Mankasitraka ny rohin'i Jay aho! Koa satria miresaka momba ny fitaovana maro be eto izahay, dia manindrona ny tenanay amin'ny rohy mivoaka izahay ka andramako ny fomba fiasa mba hahitana raha manatsara ny vokatra SEO amin'ny ankapobeny izany. Hizara izany vaovao izany aho amin'ny lahatsoratra ho avy.
RE: Paikady, tsy voatery tsy mitovy hevitra aminao aho fa sarotra ny manazava tanteraka ny fitsapan-kevitra ao anatin'ny lohatenin'ny fitsapan-kevitra irery. Afa-po aho noho ny fahafantarako fa azon'ny olona ny tanjona ao ambadiky ny fitsapan-kevitra ary tsy tafiditra amin'ny minutia. Tsy maintsy nanandrana namorona 'dingana' aho tamin'ny fitsapan-kevitra mba hahitana ny haavon'ny haingo sy ny fifandraisan'ireo orinasa amin'ny paikadiny.
Tsy mora izany… fa mandany herinandro amin'ny teny verbiage fa tsy manao fitsapan-kevitra fotsiny mba hahatsapana fa misy ny varotra. Te-hivoaka ny fitsapan-kevitra aho. Raha fanadihadiana ara-pomba ofisialy sy manan-kery ara-statistika io, dia ho naka paikady hafa lavitra aho.
Lazaiko fa tsy 'tsy maintsy' tsy miombon-kevitra aho satria manana orinasa nanangana ny paikadiny tamin'ny alalan'ny votoaty syndicating fotsiny aho… na mandoa olon-kafa fotsiny. Ny fitaovana 'mety' ho tetika.
21 Septambra 2011 à 2:51
Misaotra amin'ny valin-kafatra! Hiverina hamaky lahatsoratra bebe kokoa aho, ary faly aho fa nifandray taminao i Jay.
Miaiky avy hatrany aho fa manana sombin-tsoroka aho rehefa miresaka momba ny "paikady media sosialy." Mino aho fa raha tsy drafitra midadasika sy niniana natao ny zavatra tanterahin'ny orinasa iray, dia tsy paikady izany. Fa kosa, asa be atao fotsiny. Indraindray dia miasa izany, fa ny ankamaroan'ny fotoana dia mamela anao eo amin'ny toerana nanombohanao, mahantra sy reraka ihany. Tolotra ho an'ny indostriantsika izany isaky ny misy manampy ny mpitarika fikambanana hamantatra ny tena tetika.
21 Septambra 2011 à 2:55
Ary izany no tokony hataonao, Daniel! Betsaka loatra ny olona mihazakazaka sy mandrava orinasa… mamporisika azy ireo hitsambikina alohan'ny hametrahany ny paikady feno. Hampitandrina kely kokoa aho amin'ny ho avy amin'ny verbiage-ko. Mamerina ny fisaorana anao! 🙂
21 Septambra 2011 à 3:37
Amena, Doug. Amena. Na izany aza, heveriko fa mihoa-pefy ianao fa azoko izay hevitrao. Zava-dehibe ny fandrefesana ary mbola zava-dehibe kokoa ny fahafahana manatitra ny vokatrao ara-potoana.
21 Septambra 2011 à 3:42
Niezaka nanitsy ny hevitro aho fa tsy afaka noho ny antony. Mino aho fa mahasoa ny manakarama olona manana “vahoaka amin'ny sehatra cross-platform, blah-blah, fitenin'ny orinasa, traikefa amin'ny haino aman-jery mivantana” fa zava-dehibe kokoa ny manakarama olona mifototra amin'ny vokatra. Satria tsy ampy traikefa ny olona iray dia tsy midika izany fa tsy afaka manome vokatra misy dikany sy mitondra vokatra izy ireo.
21 Septambra 2011 à 3:51
Tsy azoko antoka fa manaiky aho, Kyle. Raha misy olona tsy manana traikefa dia tokony hanokana fotoana handehanana hiasa any amin'ny toerana iray ary haka izany. Hitako fa be loatra ny orinasa tarihin'ny olona tsy manana traikefa. Raha ny vokatra… mila mifanaraka tsara izy ireo vao hatoky azy ireo amin'ny tetibolako. Tsy hanantena zavatra latsa-danja amin'ny mpanjifako koa aho. Tsy miofana intsony izahay… eto dia misy asa sy orinasa miankina aminay.
21 Septambra 2011 à 4:30
Heveriko fa avy amin'ny toerana misy ahy mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra aho. Rehefa manorina fiofanana ho an'ny orinasa aho dia tsy olana ny tsy fahampian'ny traikefa amin'ny orinasa. Ankehitriny, manaiky aho fa ny marketing, ny fampandrosoana ary ny consulting dia mety hanana olana. Rovitra aho tamin'io. Nanana orinasa aho nandritra ny 5 taona izay tsy nanana “experience” talohan'ny nanombohanay azy.
Heveriko fa tsy mila mandeha "miasa any ho any" ianao vao azo raisina ho mpanolo-tsaina na olona afaka manome lanja. Raha karamaina aho hanentana ny ekipa mpanatanteraka na hanampy amin'ny famolavolana paikady ho an'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa lehibe… raha manome sanda aho… dia tsy maninona izany.
Manana lisitra feno olona efa za-draharaha izay tsy nahomby aho. Tsy fantatro raha traikefa no olana… tsy tokony ho ny fahaizanao manatitra izay amidinao ve? Vanim-potoana?
Ary minoa ahy, avy amin'ny lafiny fivarotana zavatra aho ary tsy mahomby… Heveriko fa manana isika rehetra.
21 Septambra 2011 à 4:40
Heveriko fa tsy mifandray amiko amin'ny lafiny 'traikefa' ianao. Tsy nanorina fiofanana ho an'ny orinasa momba ny fananganana orinasa mahomby ianao… nanorina fiofanana momba ny fampiasana tsara ny media sosialy ianao, sa tsy izany? Ary nampianarina momba ny fampivelarana fiofanana ianao, sa tsy izany?
Noho izany… zavatra niainanao izany… ary nahomby ny fiofananao. Hanakarama anao amin'izany aho… fa tsy hanakarama anao aho hanampy ny orinasako amin'ny programa momba ny fahasalamana vaovao rehefa tsy manana traikefa any ianao, sa tsy izany?
Raha ny momba ny tsy fahombiazana dia tsy hiara-hiasa amin'ny olona mihitsy aho raha nilaza izy ireo fa tsy nahomby mihitsy. Heveriko fa ny nolazaiko dia "consistent" amin'ny fahafahany mahazo vokatra. Tena mamela toerana ho an'ny tsy fahombiazana izany. Saingy tsy hanakarama consultant koa aho izay milaza hoe "hatramin'izao fotoana izao, efa niasa tamin'ny mpanjifa 8 aho ary tsy nahazo valiny ho an'ny 4 amin'izy ireo". 🙂
21 Septambra 2011 à 8:10
Mifandray daholo ny haino aman-jery rehetra (tsy misy dikany Zuck). Ny fiantsoana ireo antsoina hoe mpanolo-tsaina amin'ny haino aman-jery sosialy ho “dime am-polony” dia tsy manome rariny izany. Miaraka aminao zato isan-jato aho ary mahazo ny lamosinao ry rahalahy.
26 Septambra 2011 à 5:49
"Ny mpanoro hevitra momba ny media sosialy dia ampolony ariary ary ny mari-pahaizana dia toa izay afaka manambatra fehezanteny 140 miaraka amin'ny tenifototra sy marika @."
Saika mahamenatra fa tsy tafiditra amin'ny tarehintsoratra 140.
Mazava ho azy, raha mino ny 10,000 ora ianao, dia ho sarotra ho an'ny tsirairay ny ho manam-pahaizana amin'ny media sosialy; tsy ela akory izay.
Nandritra ny fihaonambe Exact Target, Jay Baer dia nanamarika fa "asa ny media sosialy ankehitriny, saingy tsy ho ela dia ho lasa fahaizana izany. Toy ny fanoratana na fanaovana kopia fotsiny. Nanana olona ho amin’izany izahay taloha, dia tsapanay fa mahomby kokoa izany raha samy manana ny fahaiza-manaony ny tsirairay.” (Somary nohavaozina.) Na izany na tsy izany, heveriko fa marina ny azy.
26 Septambra 2011 à 5:57
Io lehilahy Jay Baer io dia lehilahy marina!